सलमान खानले एक्स गर्लफ्रेण्ड एश्वर्यलाई “She is so Beautiful” भनेपछि…. « News24 : Premium News Channel
सलमान खानले एक्स गर्लफ्रेण्ड एश्वर्यलाई “She is so Beautiful” भनेपछि….
अभिनेता सलमान खान र अभिनेत्री ऐश्वर्य रायले कहिल्यै पनि आफ्नो ब्रेकअपको बारेमा खुलेर बोलेका छैनन् । त्यसोत सलमान र ऐश्वर्यको ब्रेकअपको बारेमा पनि निकै चर्चा परिर्चा भएको थियो । सलमान सँगको ब्रेकअप पछि ऐश्वर्यले आफ्नो बैबाहीक जीवनलाई निकै माथि उठाईसकेकी छिन । त्यस्तै अभिनेता सलमानले पनि यो वर्ष बिहे गर्ने चर्चा चलिरहेको छ ।
ब्रेकअप पछि सलमानले पहिलो पटक आफ्नो एक्स गर्लफ्रेण्ड ऐश्वर्यको बारेमा कमेन्ट गरेका छन् । एक वेब पोर्टलको समाचार अनुसार करण जोहरको फिल्म (ए दिल है मुस्किल)को टिजर अभिनेता सलमानले हेरे पछि “सि इज सो ब्युटिफुल”ऐश्वर्य राय यस उमेरमा पनि निकै सुन्दरी छिन् र सबैको मन उनि माथि हुन्छ भन्दै बोलेका छन् । त्यस्तै सलमानले पनि पहिल्यै आफ्नो मन ऐश्वर्यलाई दिइसकेका छन् ।
करणको ए दिल है मुस्किल फिल्ममा ऐश्वर्य रायले रणबीर कपुर सँग रोमान्स गर्दै छिन् । समाचारमा आए अनुसार फिल्ममा रणबीर र एश्वर्यको केही बोल्ड सिन पनि देख्न पाईने भएको छ । पिल्ममा अनुष्का शर्माको पनि अभिनय रहेको छ । फिल्म तीहारमा रीलीज हुने भएको छ ।